thinzar's blog: Converting blog to Myanmar Unicode
ခုတလော ဖိုရမ်တွေမှာရော ဖေ့စ်ဘွခ်ပေါ်မှာပါ လူတော်တော်များများ ယူနီကုဒ်သံ တညံညံ ဖြစ်နေတယ်။ ၂၀၀၈ နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်တုန်းက မြန်မာ၃ ပြောင်းဖို့ လုပ်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကီးဘုတ်က တော်တော်ပြဿနာ တက်တာနဲ့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဘဲ ဖြစ်သွားတယ်။ အဲတုန်းက ယူနီကုဒ် ၅.၁ ထင်တယ်။ အခုတော့ ယူနီကုဒ် ၅.၂ စံ မှာ မြန်မာစာက stable ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ ကိုယ်လည်း ပြောင်းသုံးသင့်တဲ့ အချိန် ရောက်ပြီလို့ ယူဆတယ်။ ပြဿနာကတော့ နည်းနည်းတက်တယ်။ မြန်မာ ဘလော့ဂ် စရေးတုန်းကလို ခံစားချက်မျိုးပေါ့။
ပထမဆုံး font နဲ့ keyboard သွင်းဖို့လုပ်တယ်။
1. Myanmar 3: Installing Unicode Font
2. Myanmar Unicode Font Package (credits to Ko ZT)
3. Keyboard: NHM keyboard for Unicode
ဒီမှာ ဘာပြဿနာ တက်လဲဆိုတော့ အရင်နှစ်က မြန်မာ၃ သွင်းထားသေးတယ်။ အဲတုန်းက ယူနီကုဒ် ၅.၁။ အခု ယူနီကုဒ် ၅.၂ နဲ့ ထွက်လာတော့ အရင်ဖောင့်ကို delete လုပ်မရ.. replace လုပ်မရနဲ့ ရွာလည်ပါရော။ နည်းမျိုးစုံစမ်းပြီး နောက်ဆုံးမှ ပြေလည်သွားတယ်။ font ကို drag & drop နဲ့ တစ်ခြားနေရာ အရင်ရွှေ့ (Windows ကို C:\_ drive ထဲမှာ သွင်းထားတာဆိုရင် C:\_ drive ရဲ့ တစ်နေရာရာကို ရွှေ့ရမယ်။ ဖျက်လို့ရမယ့် နည်းလမ်းတော့ ရှာမတွေ့သေးဘူး။) ပြီးမှ ဖောင့်အသစ်ပြန်သွင်းရတယ်။
ဖောင့်သွင်းပြီးပြီ။ NHM Writer သွင်းထားတော့ Alt + 1 နှိပ်ပြီး ယူနီကုဒ်ပြောင်းတယ်။ notepad မှာ စာရိုက်တယ်။ အိုကေ။
Firefox အတွက် Plugin (credits to ကိုစိုးမင်း)
Unicode 5.1 to Zawgyi 2009 Converter as Bookmark
Google Chrome အတွက် Extension (credits to saturngod)
မြန်မာဘလော့ဂ်တွေ ကောင်းကောင်းဖတ်လို့ရသွားပြီ။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ဘလော့ဂ် တစ်ခုလုံးကို ယူနီကုဒ်ပြောင်းဖို့လုပ်ရတယ်။ အဲဒီအတွက် Unicode Converter ကို Myanmar NLP
ကနေ ဒေါင်းလုတ်လုပ် ဘလော့ပို့စ်တွေကို xml ထုတ်၊ convert လုပ်၊ upload ပြန်လုပ်လိုက်တယ်။ ဘလော့သက်တမ်း သုံးနှစ်လောက်မှာ စုစုပေါင်း ၁၅၇ ပုဒ် တိတိကြီးများတောင် ရေးထားတာဆိုတော့ ခဏဘဲကြာတယ်။ ပြီးတော့ ဘလော့တန်းပလိတ်မှာ CSS တွေကို လိုက်ပြောင်းတယ်။ ပြီးသလောက်တော့ ရှိသွားပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ် ကြည့်တော့ ဟုတ်သလိုလို။ ဒါပေမယ့် ဘလော့ဂ် တစ်ခုလုံးမှာ အသတ်နဲ့ အောက်ကမြစ် တွဲထားတဲ့စာလုံးတွေ တစ်ခုမှ မအိုကေဘူး ဖြစ်နေတယ်။ တစ်ပုဒ်ချင်းစီ လိုက်ပြင်ရင်လည်း ပြင်တုန်းက အကောင်း publish လုပ်လိုက်ရင် ဒုံရင်း ဒုံရင်း ဖြစ်သွားရော။ ကိုဇက်တီ ကတော့ အားပေးပါတယ်။
တစ်ချို့ ကွန်ဗာတာက ယူနီကုတ် ၅.၁ ထွက်တုန်းက ရေးထားတာပါ။ ၅.၁ ကနေ ၅.၂ ပြောင်းတဲ့ အချိန်မှာ ကျန်တာတွေ အားလုံး တူပေမယ့် အောက်ကမြင့်ကို သိမ်းတဲ့ပုံစံ ပြောင်းသွားတယ်။ သဉ္ဇာ့ ဆီမှာ အခု ရှိတဲ့ဖောင့်က ၅.၂ ဖောင့် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် အခုလို မြင်နေရတာ။ ဒါလေးတော့ လောလောဆယ် Manual ပဲ ပြန်ပြင်လိုက်ပါ။
ခုလောလောဆယ်တော့ ဒီအတိုင်းထားလိုက်ဦးမယ်။ sidebar က widget တွေကလည်း ဇော်ဂျီတစ်ဝက် ယူနီကုဒ် တစ်ဝက် ဖြစ်နေတုန်းဘဲ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြင်ယူရမယ်။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် တော်တော်တော့ ခရီးရောက်သွားပါပြီ။ သူများပြောင်းလို့ ဒီအတိုင်း ပေါ်ပင် လိုက်လုပ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာလို search လုပ်တဲ့အခါ result တော်တော်များများက မြန်မာ ဘလော့ဂ်တွေကနေ လာတာပါ။ ဇော်ဂျီသုံးတုန်းက စာအရေးအသား အထားအသိုကို သိပ်ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့ ရေးချင်သလို ရေးခဲ့တယ်။ နည်းနည်းလေး မှားလိုက်တာနဲ့ search engine က မသိတော့ဘူး။ ယူနီကုဒ်စံကို လိုက်နာလိုက်ခြင်းအားဖြင့် ကိုယ်ရေးထားတဲ့စာတွေဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ တစ်ယောက်ယောက်အတွက် အုတ်တစ်ချပ်၊ သဲတစ်ပွင့်၊ နှမ်းတစ်စေ့လောက်တော့ ဖြစ်တန်ကောင်းပါရဲ့။
(ယူနီကုဒ်ကို convert လုပ်ပြီး upload လုပ်တဲ့အခါ publish လုပ်မိသွားလို့ feed reader ကို spam လုပ်သလို ဖြစ်သွားရင် Feed ကို subscribe လုပ်ထားတဲ့သူတွေကို တောင်းပန်ပါတယ်။)
ဘယ္လိုမွ ဖတ္လို႕မရ ပါလား ဟရို႕
ဟီးဟီး။ ကွန်ပလိန်းတော့ စပြီ။ တောင့်ထား တောင့်ထား။ :D
3/1/11 4:59 PM
Ko AATO>> Bcoz I converted my blog to unicode. You may install unicode font pack uploaded by ko ZT.. http://www.mediafire.com/?dnm0ayn0whw
Ko ZT>> ဪ.. အားပေးရှာတယ်.. တကယ်.. တောင့်ပါတယ်.. အစကတည်းက သိပ်လည်းမရေး.. ဖတ်တဲ့သူလည်း သိပ်မရှိဘူးဆိုတော့.. ကိုဇက်တီတောင် တောင့်ခံနိုင်သေးတာဘဲ.. အဟဲ..
3/1/11 5:14 PM
သေဖော်သေဖက် တစ်ယောက်တိုးလာတယ်လို့ သဘောထားပါတယ် :P
3/1/11 5:38 PM
CalmHill>> aha..သေဖော်သေဖက်.. ခုလို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုတာ ဝမ်းသာပါတယ် :D
3/1/11 5:43 PM
Hmm, Ma gyi, I think font-family attribute should also include 'Myanmar3' and other popular unicode fonts.
trh>> I set the other unicode fonts at CSS code for "body" block.. but just use "Win Uni Innwa" for each post <span style="font-family: tag.. Shud i put all of them in each "span" tag as well?
3/1/11 6:02 PM
ေဖာင့္လဲသြင္းၿပီးလို့ တၿခားဘေလာ့ေတြဖတ္လို့ ရတယ္။ ကိုဇက္တီဘေလာ့လဲဖတ္လို့ရၿပီ။ ဒါေပမယ့္ မရဲ့ဘေလာ့က်ေတာ့ ဖတ္လို့မရဘူး။ ဘယ္လိုဆက္လုပ္ရမလဲ။
4/1/11 1:41 AM
Thinzar, you can place all Unicode fonts in your CSS or span tag so that people can read it if they have one of them.
Myanmar3, Parabaik, Padauk, 'Win Uni Innwa', 'Masterpiece Uni Sans', 'MyMyanmar Unicode', Thanlwin, Xenotype
4/1/11 3:22 AM
Pan Nu>> Thanks for pointing me out. looks like i am still hving some CSS issues. I'll fix it soon..
Ko ZT>> I see.. that's the trick huh.. i'll do that.. thanks.. :)